Waa maxay Iftiiminta TV-ga iyo Korjoogteynta? - Nalalka Nalalka ee MediaLight
CAJIIB! Laydhka ISS-ee Shahaado-Bixinta Ka Helay Kaliya $ 14.95! Bilaash FedEx 2-Maalmood oo Maraakiibta Mareykanka ah.
ISF Waa la xaqiijiyay
Waa MediaLight Sax ah
Taxanaha MediaLight Mk2
Mk2 Dayax Madoobaadka 1m
MediaLight Mk2 Marinka 24 Volt
Nalalka iftiinka ee MediaLight Mk2
Nalalka-Lume Pro Desk Siraaj
Qalabka MediaLight DIY
LX1 Nalalka Eexda
LX1 Eex Nalalka (1 Mitir)
LX1 Eex Nalalka (2 Mitir)
LX1 Eex Nalalka (3 Mitir)
LX1 Eex Nalalka (4 Mitir)
LX1 Eex Nalalka (5 Mitir)
LX1 Eex Nalalka (6 Mitir)
Waa maxay farqiga u dhexeeya MediaLight & LX1?
MediaLight Pro 20 "Qalab adag
Fur Box Sanduuqa
Wixii Kumbuyuutarro ah
LX1 Laydh Laydh 1 Meter Marinka
MediaLight Mk2 Flex (2-6 mitir)
LX1 Laydhka Nalalka (2-6 mitir)
Waa maxay TV-ga iyo dabagalka nalka toosan?
Dhererkee ayaan ku helayaa TV-ga?
Isbarbardhiga LX1 iyo MediaLight Mk2
Dammaanadda 5-Sano ah ee MediaLight
Soo Celinta 45 Maalin & Beddelka
Boorsada Boostada ee Jason
MediaLight oo ku taal Reddit
Fahamka de minimis qiimaha
Ka iibso Flanders Sayniska
Dimmer iyo arrimo fog
Arimaha Sony Bravia
Vizio TV iyo Soundbar Remote Xakamaynta Arimaha Wadahadalka
TV-ga LG wuxuu leeyahay oo keliya dekedda USB 2.0
Rakibaadda & hagaajinta
Rakibaadda Nalalka ee MediaLight Mk2
Rakibidda LX Laydhka eexasho LX1
Helitaanka heerka dhalaalka fiicnayn
Waa maxay Iftiiminta TV-ga iyo Korjoogteynta?
Waa maxay iftiiminta eexdu maxayse tahay sababta aan u maqalno inay ahaato CRI heer sare leh heerkul midabkiisu yahay 6500K?
Iftiiminta eexdu waa isha laga helo iftiinka ka soo baxa muuqaalkaaga gadaashiisa, iyadoo la hagaajinayo waxqabadka laga arko TV-gaaga ama kormeerahaaga, iyadoo la siinayo tixraac joogto ah oo loogu talagalay indhahaaga. (Kama hadlayo laydhadhka nalka cusub ee midabada LED-ka ee qolkaaga fadhiga u rogaya diskoo).
Muxuu qabtaa iftiinka eexda?
Iftiiminta eexashada saxda ah waxay keeneysaa seddex horumar oo muhiim ah jawigaaga aragtida:
Marka hore, waxay yareysaa culeyska indhaha. Markaad ku daawaneyso jawi mugdi ah, muujintaadu waxay ka bixi kartaa gebi ahaanba madow illaa muuqaal aad u dhalaalaya marar badan inta lagu jiro bandhig ama filim. Ardayda indhahaagu waxay u baahan yihiin inay si dhakhso leh ugala qabsadaan mugdiga guud illaa nuurkan ifaya iyo, muddadii fiidkii la daawanayay, waxaad la kulmi kartaa daal indhaha u badan. Iftiiminta eexdu waxay xaqiijineysaa in indhahaagu had iyo jeer leeyihiin il iftiin leh oo qolka ah iyadoon laga gaabin, ama ka tarjumaynin muuqaalkaaga. Tani waa mid ka mid ah sababaha nalka eexdu ficil ahaan baahi ugu tahay telefishin kasta oo OLED ah, oo awood u leh madow aad u daran, iyo nooc kasta oo HDR ah, oo awood u leh iftiin sare
Marka labaad, nalka eexdu wuxuu hagaajinayaa muuqaalkaaga lakala garanayo. Adoo siinaya tixraac fudud oo ka dambeeya telefishanka, madowgaaga muuqaalkaagu wuxuu u muuqdaa madow marka la barbardhigo. Waxaad si sax ah u arki kartaa sida tani u shaqeyso adoo fiirinaya jaantuskan. Laydiig cirro leh oo dhexda ku taal runti waa hal hadh oo cawl ah, laakiin markaan fududeyno aagga ku hareeraysan, maskaxdeennu waxay u aragtaa inay sii madoobaatay.
Ugu dambeyntiina, nalka eexdu wuxuu siiyaa tixraac dhibic cad nidaamkaaga muuqaalka ah si aad isugu dheellitirto midabada shaashadda. Adoo siinaya soo-saarista ugu dhow uguna habboon ee loo yaqaan 'D65 white white', 'MediaLight' ayaa ah tan ugu fiican alaabada suuqa si loo gaaro midab aad u sarreeya.
MediaLight waa ururinta nalalka hogaamiya midabada ColorGrade ™ LED ee xarigga xabagta, kaas oo bixiya xalka fudud ee xoogga leh eexashada dalab kasta. Si fudud ayaa loogu rakibay daqiiqado gudahood, xaaladaha badanaaba, waxaa lagu adeegsadaa dekedda USB-ga telefishankaaga, taasoo la micno ah in MediaLight ay si toos ah u daari doonto oo u demin doonto telefishankaaga. Tani waxay MediaLight ka dhigeysaa rakibaadda "dejisid iyo illow" iyo, markaad tixgeliso in dhammaan xargaha nalalka ee MediaLight ay taageerayaan damaanad shan sano ah, waxay ka dhigan tahay inay si fudud u yihiin kor u qaadista qiimaha ugu wanaagsan ee aad ku sameyn karto jawigaaga madadaalada guriga.
Laakiin maahan oo kaliya codsiyada masraxa guriga - MediaLight waxaa sidoo kale loo adeegsadaa jawiga kala-saarida midab-xirfadeedka sidoo kale. Xaqiiqdii, qoyska MediaLight hadda waxaa kujira laambadaha loo yaqaan D65 laambadaha iyo guluubyada oo dhammaantood leh isla 98 CRI iyo 99 TLCI ColorGrade ™ Mk2 LED chip oo ah qalabka MediaLight, waxaana lagu taageerayaa dammaanad saddex sano ah.
Waxaad u maleyn kartaa in OLED uusan ka faa'iideysan nalalka eexda, laakiin waad khaldami laheyd. Sababtoo ah heerarka madow ee wanaagsan iyo saamiga aad u sarreeya ee saamiyada OLED iyo Micro LED, muuqaalka indhaha ayaa ah walaac weyn.
Waxaad dhahdaa miyaanad dareemayn culayska indhaha? Iftiinka la garto ama mugdiga muuqaalka ayaa wali la sii wanaajin karaa oo is-barbar-dhigga wali waa la xoojiyaa, iyadoon loo eegin awooda bandhigga.
Sawirka soo socda, waxaan ku soo bandhigeynaa laba jibbaaran oo cadcad bartamaha calaamada madow oo lagu daray. Keebaa u muuqda mid ifaya?
Labaduba waa isku mid, oo labaduba waxay ku xaddidan yihiin iftiinka ugu sarreeya ee muujintaada.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad dhahday in jadwalka cad ee bidixda bidix u muuqda mid dhalaalaya, waxaad hadda uun soo martay sida nalalka eexdu ay kor ugu qaadaan farqiga. Dad badan ayaa si qalad ah u aaminsan in nalalka eexdu ay kaliya hagaajiyaan faahfaahinta hooska. Hadda waad caddayn kartaa inay khaldan yihiin. Nalalka eexashada waxay xoojinayaan kala duwanaanshaha la dareemay iyada oo loo marayo dhan kala duwanaansho firfircoon - - ma aha oo kaliya hooska!
Xalkeenna Ugu Fiican Ee Nalalka
Noqo mid gacansaar la leh
Xuquuqda daabacaadda © 2021 MediaLight Laydhka Nalalka.
** wadarta_ tirada ** | ** unit_price ** / ** halbeeg_qiyaas **